2020 umphathi wethu wamkela umntwana wakhe wesithathu, inkwenkwe entle, siyakuvuyela !!!
2019 Sifudukele kwizityalo ezitsha.
Umboniso we-83 wamaTshayina weZiko lezoNyango lweZonyango (i-CMEF)
I-CMEF yasekwa ngonyaka we-1979 kwaye yabanjwa kabini ngonyaka. Emva kweminyaka engaphezulu kwama-40 yokuvela kwezinto ezintsha kunye nophuhliso, i-CMEF iye yaba liqonga leenkonzo ezibanzi kwilizwe jikelele. Qho ngonyaka, i-CMEF itsalela abavelisi be-7,000 +, iinkokheli ezingama-600 + kunye ne-entrepre ...Funda ngokugqithisileyo »
Icandelo elitsha leziyobisi le-AI + lenyuse ngaphezulu kwe- $ 4.5 yezigidigidi
Umzi mveliso wamachiza uhlala uyimveliso evaliweyo. Ishishini lamayeza lihlala lahlulwe kwilizwe langaphandle ngolwazi oluntsonkothileyo nolungenabudlelane ekhemesti.Ngoku olo donga luyaqhekeka ngenxa yetekhnoloji yedijithali.Funda ngokugqithisileyo »
Ithemba lotyalo-mali kunye nohlalutyo lomkhondo kumzi mveliso omkhulu wezedatha kwi2020
Ngophuhliso lwe-Intanethi kwintengiso yehlabathi, idatha enkulu iyavela kumzuzu wembali. Ngexesha le-13 leminyaka yesiCwangciso seMinyaka emihlanu, iChina yenze iinzame ezinkulu zokuphuhlisa ishishini "le-Intanethi +". Ngaphantsi kwemvelaphi enjalo, idatha enkulu yase China ikhula ngokukhawuleza ngoku, ...Funda ngokugqithisileyo »